#Qarax khasaare geystay oo caawa lagu weeraray Guriga Guddoomiyaha Degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho - Get Latest News From Horn of Africa
#Qarax khasaare geystay oo caawa lagu weeraray Guriga Guddoomiyaha Degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho
Warar goor dhaw nasoo gaaray ayaa sheegaya in Qarax khasaare geystay lagu weeraray Guriga Guddoomiyaha degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho Maxamed Abuukar Jacfar.
Qarax oo noociisa ahaa bamka gacanta laga tuuro ayaa lagu weeraray Guriga uu Guddoomiyaha Degmada Deyniile ka deganyahay Degmada Howl-wadaag ee Magaalada Muqdisho.
Guriga xiliga Qarax lagu weeraray waxa ka maqnaa Guddoomiyaha Degmada Deyniile Maxamed Abuukar Jacfar , waxaan dad goob joogayaal ah ay warbaahinta Muqdisho u sheegeen in Qarax ay ku dhimatay Haweeney mareysay guriga agtiisa, waxaana ku dhaawacmay Gabar yar oo ay dhashay Haweeneyday Qaraxa ku dhimatay.
Ciidamada Amaanka ayaa qarax kadib waxa ay gaareen nawaaxiga guriga qaraxa lagu weeraray ayagoo howlgal halkaas ay ka sameyeen kusoo qabtay labo ilaa saddex dhalinyaro ah oo looga shakiyay in ay ka dambeeyeen Qaraxa lagu weeraray Guriga Guddoomiye Jacfar.
Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag waxaa xiliyada habeenkii kusoo batay Qaraxayada nooca gacanta laga tuuro kuwaas oo lagu weeraro Saldhigyada Ciidamada, baraha koontarool ee Isgoosyada labada degmo iyo guryaha mas’uuliyiinta degmooyinkaas.
12 hours ago 788,577
13 hours ago 37,005
13 hours ago 3,708